Alaeze nke Àkù | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Alaeze nke Àkù | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
New egwu egwuregwu naanị. Kacha nta ego £ 10 na niile 3 welcome na-enye. Max bonus £ 500. Oghere egwuregwu naanị. 30x wagering chọrọ na T na C si ide.
Alaeze abụọ bụ ndị iro ka onye ọ bụla ọzọ agha ha lanarị; otu a magburu eze na ụmụ amaala na-ọzọ a obi fere azụ na-agbalị ibibi udo. Alaeze nke Àkù bụ a ise ukwu N'ikpeazụ online game dabeere dị otú ahụ akụkọ. Na ndabere bụ alaeze abụọ na ha ọkọlọtọ n'elu ha castles. The queen na obi fere azụ na-guzo n'elu ụlọ elu nke ndị ala-eze. Ọzọ nwere ha nnukwu ụlọ wuru na osisi mgbe eze nwere alaeze ya siri ike na nkume na boulders. E nwere ihe magburu onwe ya music track mgbe esi anwụde akpa ogho na ụda nke nnụnụ ebe ubé na-egosi na serene ikuku nke uwa. The ịkụ nzọ ịgba na a oghere bụ n'etiti £ 0,50 na £ 250 kwa atụ ogho.
Banyere Mmepụta nke Alaeze Àkù
Nke a bara ọgaranya N'ikpeazụ online game bụ nke ndị Blue Bipute Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ. Ha bụ otu n'ime n'elu họọrọ online cha cha mmepe na ụwa. Ha nwere ọtụtụ narị oghere na ndị ọzọ egwuregwu si dị iche iche na edemede na ike ga-egwuri na bụla mobile ma ọ bụ kọmputa usoro.
na nke a N'ikpeazụ online, e nwere ụfọdụ na-akpali ihe nnọchianya ndị dị otú ahụ dị ka egwuregwu logo, ezi ihu ọta na hama, Mkpughe kwuru na a nnukwu ọta na eze emblem na gold ọta na mma-agha. 10 na A si na-akpọ kaadị ndị dị ala na-akwụ ụgwọ ihe nnọchianya. The logo na-akwụ ndị kasị elu nke 500 ugboro gị eto n'elu ise n'ime ha na-arụsi ọrụ payline. The bonus akara bụ ọlaedo uwe aka, queen, mọnk na ndị obi fere azụ.
Wild Symbol: The ọlaedo uwe aka bụ anụ na ọ nọ n'ọnọdụ niile isi na akara nke egwuregwu. Ise nke a na ụdị na-enye gị 1000 ugboro your eto.
ocheeze Positions: E nwere atọ ocheeze ọnọdụ ebe n'etiti-esi anwụde otu, atọ na ise. Ọ bụla atọ yiri akara na ndị a na ọnọdụ Onyinye ị a free atụ ogho. Ọ bụrụ na ihe nnọchianya nke queen, mọnk ma ọ bụ obi fere azụ dara ke otu n'ime n'ocheeze, a n'akụkụ ukwu oghere bụ unlocked. All atọ bonus akara na ndị a n'ocheeze Ị kpọghee ekwt agha bonus ebe i nwere ike imeri nnukwu.
Battle Daashi Game: na nke a N'ikpeazụ online game, ị ga-enweta ụfọdụ ọlaedo ọta na ị chọrọ iji bulie. Ọ bụrụ na ị bulie queen, obi fere azụ ma ọ bụ onye mọnk na akara ahụ kwekọrọ ekwekọ ukwu ga-akpa ogho. Ọ bụrụ na ị bulie akara na X2 mgbe ahụ, gị enweta nkwanye na-uba site 2. Ma ọ bụrụ na ị bulie kwenye, mgbe agha na-agwụ.
Summary:Nke a bụ a pụrụ iche N'ikpeazụ online na atọ n'akụkụ ukwu atụmatụ na-enyere gị aka imeri nnukwu stakes. The ndịna na-aga aga na-n'ezie na n'ịnọgide na elu-edu ụda na picture.
Mobile cha cha ego site na Ekwentị Bill | Slots Pay by…
Mobile cha cha ego site na Ekwentị Bill | Ohere mepere Lezienụ site na Ekwentị Bill
Slotfruity.com na kwadoro site na Nektan (Gibraltar) Limited, Na ikikere site na Government nke Gibraltar (RGL No.54) na ikike 000-039107-R-319400-006 nyere site UK Ịgba chaa chaa Commission. Nkwado Ndị ahịa: 020 3700 0991 / slotfruity.support@nektan.com